Chlorofluorocarbons: ihe niile ị chọrọ ịma | Netwọk Mgbasa Ozi
N'ezie, mgbe ị nụrụ banyere oghere dị na oyi akwa ozone nke gas ndị na-akpata ya na-agụta. Ihe kemịkalụ kemikal mere ka mbelata ikuku ozone bụ chlorofluorocarbons. Ndị a bụ kemịkal gas nke ejirila kemgbe ha bidoro na 1928. A na-akpọkwa ha aha CFC. A nyochachara ha nke ọma ma gosipụta na ngwongwo ha nwere ike ọ bụghị naanị ahụike ọha na eze kamakwa na oyi akwa ozone. Ya mere, amachibidoro iji ya eme ihe.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe chlorofluorocarbons bụ, ihe njirimara ha bụ na ihe kpatara ha ji emebi ozone oyi akwa.
1 Kedu ihe bụ chlorofluorocarbons
2 Kacha nkịtị chlorofluorocarbon ngwaahịa
3 Mmetụta ọjọọ nke chlorofluorocarbons na ikuku
4 Ozone onu
Kedu ihe bụ chlorofluorocarbons
Ndị a bụ kemịkalị mejupụtara carbon, fluorine, na atom chlorine. N'ihi ya aha ya. A atọm so na otu ndị halocarbons ndị bụ otu gas anaghị egbu egbu ma ọ bụ na-enwu ọkụ. Ha sitere na nke mbụ ya na 1928 dị ka ihe ọzọ na-agbanwe ihe kemịkal dị iche iche ejiri rụọ ọrụ na friji. Emechara ha dị ka ndị na-agba ọgwụ ahụhụ, agba, ntutu isi, na ngwaahịa nlekọta ahụike ndị ọzọ.
N’agbata afọ iri ise na iri isii ejiri rụọ ọrụ na ntụ oyi maka ụlọ, ụgbọala na ọfịs. Ihe ndị a niile mere ka chlorofluorocarbons gbasaa n'ụwa niile. N'oge ahụ, ojiji a na-eji ọgwụ ndị a amụ ihe site na ihe dị ka otu nde metrik tọn a na-emepụta kwa afọ site na nanị United States. Mgbe e mesịrị, ọ mụbara ojiji ya karịa. O ruru n'ókè nke na e ji ya mee ihe aerosol, friji bụ, ịfụ gị n'ụlọnga maka foams, nkwakọ ihe onwunwe na solvents.
Kacha nkịtị chlorofluorocarbon ngwaahịa
Chemicals ndị a enweghị ihe okike sitere na ya. Ha bụ kemịkalụ mmadụ mepụtara maka ọtụtụ ojiji. Ejiri ha dị ka friji, ndị na-emepụta ihe na ihe ndị na-emepụta ihe maka imepụta ụfụfụ. Ọ rụkwara ọrụ dị ka onye na-ehicha ihe nhicha n'ichepụta ngwaahịa eletrọniki. Ojiji ya mmetụta dị na oyi akwa ozone mụbara nke ukwuu na obere oge. A maara gas ndị a na-ebibi ozone stratospheric ruo n'ókè nke na radiation radiation ultraviolet na-emerụ ahụ nwere ike iru n'elu.
N'ime ngwaahịa chlorofluorocarbon ndị kachasị ewu ewu anyị nwere ihe ndị a:
Refrigerant dị na ntụ oyi.
Igwe nju oyi.
Ndị ọkachamara na aerosols.
Ndị na-ekpo ọkụ iji chịkwaa ụkwara ume ọkụ. Emechaa amachibidoro nke a iji belata mmetụta na stratosphere.
Haloalkanes n'ụgbọ elu.
Mgbaze chọrọ griiz mee elu mee.
Mmetụta ọjọọ nke chlorofluorocarbons na ikuku
Dịka e kwuru na mbụ, a maara kemịkal ndị a ka ha mebie oyi akwa ozone. Nke a pụtara na ọtụtụ ihe radieshon ultraviolet sitere n’anyanwụ nwere ike ịgafere gafere wee ruo n’elu ụwa. A hụrụ na ọ nwere ọtụtụ mmetụta na-adịghị mma na ahụike anyị. Ma ọ bụ na, ebe ha bụ ogige dị iche iche na-arụ ọrụ na kemịkal, echere na ha agaghị emerụ ahụ na mbara igwe. Otú ọ dị, ka oge na-aga, a chọpụtara na gosipụtara na radieshon ultraviolet na ikuku, akpan akpan ke stratosphere.
Na oyi akwa a nke ikuku enwere otutu ozone nke na enyere anyi aka iwelata oria ultraviolet nke sitere na anyanwu. A maara nnukwu ọnụọgụ ozone a dị ka oyi akwa ozone. Mgbe chlorofluorocarbons na radieshon na-emekọrịta ihe, ha na-enweta ire ere nke na-eme ka anyị ghọọ isi iyi nke chlorine inorganic. Mgbe chlorine tọhapụrụ n'ụdị atọm, ha nwere ike iwalite mgbanwe nke mkpụrụ ndụ ozone n'ime oxygen. Nke a pụtara na ọ na - eme ka mmeghachi omume kemikal na - agbanwe ozone na oxygen.
Anyị na-echeta na ikuku ozone nwere ikuku atọ oxygen. Oku ikuku di n’ikuku nwere ikuku oxygen abuo. N’ụzọ dị otu a, chlorine na - arụ ọrụ dị ka ihe mkpali iji mee ka ọnụọgụ na ọnụọgụ nke kemịkalụ na - agbanwe ozone na oxygen. N'ihi ya Ihe ruru 100.000 mkpụrụ ozone nwere ike mebie maka atom atọm ọ bụla ewepụtara. Ihe ndị a niile bụ ihe kpatara chlorofluorocarbons na mbibi nke oyi akwa ozone.
Ọ bụghị na kemịkal ndị a na-ebibi ozone dị na stratosphere, kama ọ bụ na achọrọ mmeghachi omume kemịkal dị iche iche ka ha wee mee. Agbanyeghị, ọnụego nke aga-ebubata chlorofluorocarbons na mbara ikuku mere ka ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ozone stratospheric na-apụ n'anya. Nwepu nke oyi akwa ozone nwere ihe na-emebi ihe ma nwekwuo mmetọ kemịkal. Ọ bụkwa ya bụ ozone na-elekọta ya mụta ihe dị ukwuu na radieshon nke ikuku ultraviolet nke dị n'etiti ogologo ntụgharị nke 280 na 320 nm nakwa na ọ na-emebi ma anụmanụ ma ihe ọkụkụ ma mmadụ, n’ezie.
Ojiji nke mmiri ọgwụ ndị a emeela ka oghere dị na oyi akwa ozone. Ọ bụghị na enwere oghere n'onwe ya na-enweghị ịta nke ozone. Ọ bụ naanị mpaghara ozone dị n'okpuru ala. Ntinye uche a dị ntakịrị iji ghara ikwe ka radieshon ultraviolet nọrọ na mpaghara ahụ wee banye n'ime ụwa.
Agbanyeghị na amachibidoro chlorofluorocarbons, n'ihi na ha nwere nnukwu kemịkal kemịkal na enweghị ike ịgbasa, ọbụnadị taa, nnukwu akụkụ nke kemịkal ndị ewepụtara n'oge afọ ndị gara aga ka achọpụtara. Nke a bụ n'ihi na ha nwere ogologo ndụ na ikuku. Kemgbe 1987 usoro iwu Montreal ghọtara na mmiri ọgwụ ndị a dị ka ihe na-emerụ ahụ na nkwekọrịta mba ụwa ndị ọzọ sonyere na nke kpatara ma ọ bụ machibido kemịkal ndị a, ebe ha na-arụkwa ọrụ dị ka gas.
Dịka ị pụrụ ịhụ, chlorofluorocarbons nwere nnukwu mmetụta na-adịghị mma ma na ikuku, yana anụmanụ, osisi na mmadụ. Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere chlorofluorocarbons.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Chlorofluorocarbons